Technicolor PostWorks 'Ben Murray oo Hogaaminaya Guddi Qaybin ah oo ku Saabsan DOC NYC - NAB Muujinta Akhbaaraha ay daabacaan Warbaahinta. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » News » Technicolor PostWorks 'Ben Murray oo Hogaaminaya Guddi Qeybin ah oo ku saabsan DOC NYC
Technicolor PostWorks 'Ben Murray oo Hogaaminaya Guddi Qeybin ah oo ku saabsan DOC NYC
NEW YORK - Technicolor PostWorks Ku-xigeenka Madaxa Adeegyada Creative Services Ben Murray wuxuu dhexdhexaadin doonaa wada-hadal kooxeed oo ku saabsan diyaarinta filimaad loogu talagalay Shakaalka DOC NYC PRO Conference ee todobaadka soo socda, oo lagu qabanayo xaflad fiidkii DOC NYC. Murray waxaa ku biiri doona John Campbell, lataliye iyo madaxa maamulka Buffalo 8; soo saaraha / agaasimaha Blair Foster ee Waxsoosaarka Jigsaw, iyo filim Alysa Nahmias, oo aasaasay Ajna Films. Cinwaankeedu yahay Daraasadda Xaaladda: U Diyaargarow Filmkaaga Qeybinta, kulanka waxaa loo qorsheeyey Talaadada, November 13 at 3: 45 oo ku yaala Xarunta IFC.
Iyada oo la kordhinayo adeegyadda akhristaha iyo hannaanka web-ku salaysan, filim sameeyeyaasha maanta waxay leeyihiin fursado badan intii ay ku duulin lahaayeen filimkooda, laakiin kuwa aan qorsheynin si taxadar leh waxay sameyn karaan khaladaad kharash badan ama aan gaarin natiijooyinka ugu fiican. "Guddigu wuxuu bixinayaa talooyin ku saabsan kaliya diyaarinta farsamada, laakiin shaqada oo dhan oo gala qeybinta filimka," ayuu yiri Murray. "Taas waxaa ka mid ah manhajka, ololaha ololaha ololaha iyo ka shaqeynta qaybiyeyaasha si ay u helaan ereyga."
John Campbell wuxuu aasaasay JCINTIME, LLC, shirkad hal abuur leh iyo shirkad wax soo saar leh, iyo lataliye iyo madaxa maamulka Buffalo 8, shirkadda Bond Media iyo shirkad warbaahin oo buuxda oo leh horumarinta, wax soo saarka, soo-saarka iyo adeegyada maareynta macaamiisha. Waxa uu maamulaa filimada iyo agaasimaha telefishanka, qorayaasha iyo jilayaasha. Dhibcaha uu ka mid yahay wax soo saaraha waxaa ka mid ah A Boy, A Girl, A Dream, Baxsaday iyo dukumiinti soo socota Mustaqbalka Casriga ah. Waxa kale oo uu soo saaray 2018 March March Festival Festival.
Blair Foster ayaa ku guuleystay laba abaalmarin Emmy Awards ee hawsheeda Academy Award- filim shidaal Taksiyada u gudbi dhinac madow iyo sidoo kale Emmy loogu talagalay Martin Scorsese George Harrison: Ku noolaanshaha Dunida Material. 2017, waxay u hoggansantahay oo ay soo saartay, oo ay wehliyaan Alex Gibney, Rolling Stone: Sheekooyinka laga soo qaaday Edge HBO. Waxay kaloo soo saartay document-kiisa Netflix Qaado Me Roger Stone taas oo ka dhigtay Bandhig Faneedka 2017 Tribeca. Darajooyinka kale waxaa ka mid ah Sinatra: Dhammaan ama Waxba Dhammaan, Mr. Dynamite: Rise of James Brown, Taariikhda Eagles, Waxaan xaday siraha: Sheekada Wikileaks iyo Park Avenue: Lacagta, Awooda iyo Riyada Maraykanka.
Alysa Nahmias waa abaalmarin abaalmarin ah filim oo ah tii ugu horeysay ee agaasimaha koowaad, Meelaha aan la daboolin (oo la wadaago Ben Murray), wuxuu ku guuleystay abaalmarinta 2012 Independent Spirit Award, waxaana uu ku jiraa ururinta joogtada ah ee Matxafka Farshaxanka casriga, New York. Sida wax soo saaraha hal-abuurka ah, deynteeda waxaa ka mid ah Xasilloonni darro, Maya Nuurka iyo Maya Dhulka Halka, Sabtida ee Faun: Tanaquil Le Clerq iyo Shield iyo Spear. Shaqadeeda waxaa lagu muujiyay xafladaha iyo bandhigyada caalamiga ah, oo ay ka mid yihiin Sundance, Berlinale, SXSW, HotDocs, Sheffield Doc / Fest, CPH: DOX, iyo Jilitaanka Filimada Lincoln's Sound + Vision, waxaana lagu sii daayay aaladda Maraykanka iyo UK.
Ben Murray waa Madaxweyne Ku-Xigeenka, Adeegyada Horumarinta ee Technicolor PostWorks NY. Macaamiisha caadiga ah waxaa ka mid ah Ken Burns, Alex Gibney, Michael Moore iyo Martin Scorsese. Muujinkiisa oo hogaaminaya kulankiisii ​​ugu horeysay, Meelaha aan la daboolin, wuxuu ku guuleystay abaalmarinta 2012 Independent Spirit Award waxaana lagu tijaabiyay damaashaadka iyo tartamada caalamiga ah. Wuxuu aasaasay Qolka, shirkad soo saarka bakhaarada ah oo wada shaqeyn la leh Deluxe iyo Technicolor ka hor inta uusan helin Technicolor PostWorks ee 2012. Waxa uu haystaa BFA ee Filimka iyo Telefishinka ee Jaamicadda New York ee Tisch ee farshaxanka farshaxanka, isla markaana wuxuu iminka yahay musharax MBA oo ku yaal Iskuulka Wharton, Jaamacadda Pennsylvania.
Taageerayaal badan oo ka mid ah filim bixiyeyaasha dokumantiga ah iyo kuwa madaxa banaan, Technicolor PostWorks waxay bixisaa adeegyo soo-saarka kambuyuutarka ah oo loogu talagalay afar filim oo baadhitaan ah sannadkan DOC NYC film festival. Waxaa ka mid ah:
Maxay sheekeynaysaa: Farshaxanka Pauline Kael (iswaafajinta tifaftirka, shahaadada midabaynta iyo natiijooyinka).
Xukunka (iswaafajinta tifaftirka, shahaadada midabaynta iyo natiijooyinka).
Ciqaabta + Ciqaabta (iswaafajinta tifaftirka, shahaadada midabaynta iyo natiijooyinka).
Breslin iyo Hamill: Dhamaan Dhismayaasha Farshaxanka (iswaafajinta tifaftirka, shahaadada midabaynta iyo natiijooyinka).
Technicolor PostWorks New York waa sawir soconaya digital iyo post-soo-saarka xarunta ugu dhamaystiran Coast East ee, shaqaalaynta koox gaar ah ee fannaaniinta hal abuur leh, injineero iyo maamulayaasha mashruuca si ay ugu adeegaan macaamiisheena marayo geedi socodka filimada iyo TV dhammaado.
Technicolor PostWorks New York waxay bixisaa hal il dhamaystiran shuruud kasta post, oo ay ku jiraan in-macnaha bogag digital, imaging filimada iyo dib u soo celinta, iskaashi tifaftirka non-toosan iyo HD/ UHD dhammeeyey warbaahinta, 4K shineemo digital, taageero meertada content caalamiga ah, iyo adeegyada filimada iyo dhawaaqa TV ballaaran oo sagaal marxaladaha isku darka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.technicolorpwny.com
Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 Qaybinta deymaha Filimadan film madax banaan wax soo saarka post SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka TV Technology Ultra HD Forum Video Engineer	2018-11-08
Previous: Xirfadaha Warbaahintu waxay sii daayaan Barnaamijka Luqada Jabaan ee ProMD Software Management
Next: Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka kontoroolka, Dib u habeyn loogu baahin karo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax-soo-saarka Is-dhexgalka
Hey Buddy !, waxaan helay macluumaadkaan adiga kugu saabsan: "Technicolor PostWorks 'Ben Murray oo hogaaminaya Guddi Qaybin ah ee DOC NYC'. Halkan waxaa ah bogga internetka: https://www.broadcastbeat.com/technicolor-postworks-ben-murray-to-lead-a-panel-on-distribution-at-doc-nyc/. Mahadsanid.